छोराले आमालाई सम्झिदा अर्जुन बिक रोए ! छोराको जीवन फेरिदा श्रीमति सम्झिएर बोल्न सकेनन्(भिडियो) – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /Video/छोराले आमालाई सम्झिदा अर्जुन बिक रोए ! छोराको जीवन फेरिदा श्रीमति सम्झिएर बोल्न सकेनन्(भिडियो)
छोराको उज्ज्वल भबिष्यका लागि दिन रात परिश्रम गरिरहेका छन् । अर्जुन बिक दैनिक रुपमा यसरी नै आफ्नो सन्तान बोकेर ठेलामा समान ढुवानी सेवा गर्छन् । सन्तान प्रतिको अथाह माया तथा जिम्मेवारी एउटा बाबाको परिश्रममा देखिने रहेछ । ‬त्यसको उदाहरण हुन् अर्जुन । हेर्नुस् रिक्सा चलाएर बाबुको जिम्वेवारी पुरा गरिरहेका एउटा बाबुको द’र्दनाक कथा भिडियोमा हेर्नुस्